Emuva Ice Pack, amadolo Goqa Nge Ice Pack, Cold Therapy Amasokisi - Huanyi
Inkampani yethu izibophezele ekukhiqizeni imikhiqizo yekhwalithi ephezulu yokubanda nokushisa
I-Jiangsu Huanyi Industrial Co, Ltd. iyimboni entsha yobuchwepheshe. Le nkampani izibophezele ekwakhiweni kwemikhiqizo ye-gel ice pack ngobuhle bomuntu siqu / ukugoqa okunempilo nokwelashwa / kwezemidlalo / ukunakekelwa kwasekhaya okupholisa ukwelashwa okushisayo nokubandayo kusuka ngo-2012. Sinikeza ukuphumula, ukwelashwa ngokomzimba nosizo lokuqala ezimpilweni, Imikhiqizo iqinisekisiwe nge-SGS, i-FDA, i-CE, i-REACH, i-AZO, i-PROP65, imboni ene-BSCI audit, sinokuhlangenwe nakho okusebenzisana ne-LIDL, ALDI, Wal-mart ne-Disney.
I-Jiangsu Huanyi Industrial ekhethekile ensimini ebandayo nebandayo ye-gel ice pack iminyaka eminingi, sinokuhlangenwe nakho okuningi ukwenza ngokwezifiso umbono wakho ube wangempela, usize ukudala imikhiqizo yakho ngendlela efanelekayo yephakethe, konke ukukhiqizwa kungu-100% wokuhlolwa kwengcindezi kanye ne-100% yethrekhi uhlelo lokukhiqiza. Bonke abathengisi bethu bangunjiniyela ochwepheshe, ungakhuluma nabo nganoma imuphi umqondo noma ngemuva kwensizakalo yokuthengisa, umuntu oyedwa wazi kakhulu, ngakho-ke yiba abangane nathi, jabulela insiza yethu kusukela manje.
Isingeniso L w Ubukhulu Besisindo M 40cm 30cn 1.0cm 700g L 50cm 40cm 1.0cm 1100g LL 60cm 50cm 1.0cm 1800g XL 90cm 50cm 1.0cm 2000g Ukwehlisa ithempulethi yethempelethi yombhede wokupholisa. I-polymer ye-gel yokupholisa ifana ne-gel polymer ekupholiseni ukunamathisela izingane.I-gel polymer enokuqukethwe okuphezulu kwamanzi imunca kahle ukushisa okuvela emzimbeni womuntu kuya emethini futhi ithembele ekuqhubekeni okuphezulu nokusabalalisa kwe-gel polymer ukushisa ukwenza okuhle ukushintshanisa ukushisa nokudlulisa ...
Isingeniso PORTABLE & CONVENIENT - Lo mkhono opholile wewayini ulula, uhlangene futhi uyasebenziseka. Mane uye nayo epikinikini, ngasolwandle, ekhempini, noma kunoma imiphi imicimbi ukuze ujabulele futhi uphumule ngeziphuzo ezibandayo ngaphandle kwebhakede leqhwa. KULULA UKUSETSHENZISWA – Faka isilaza samabhodlela e-champagne efrijini cishe amahora amabili, bese ushelela emkhonweni ukuze uphole iziphuzo ngokushesha futhi uzigcine zipholile ngokuphelele amahora. Iphelele ukusetshenziswa ewayinini, kubhiya, eChampagne, njll. Usayizi womkhiqizo: 6.1 x 9.25 Inch Igama: Isikhwama sewayini esipholile, ...
Isingeniso Ukucindezela Okushisayo Futhi Okubandayo, Okuphinda Kusebenze, Akukho ukuvuza, Usayizi Ongenabuthi: 19 * 9cm, 20 * 10cm, 22 * ​​11.5cm Isisindo: 120g, 130g, 160g, 180g Isicelo Esetshenziselwa ukwelashwa okushisayo nokubandayo kusiza ukuqeda amehlo avuvukile, Amehlo akhukhumele, ukungaphatheki kahle kwesinus, i-migraines, inikeza ukukhululeka ngaphandle kwezidakamizwa. Ingasetshenziswa njenge-mask yokuvimbela ukukhanya ekukhanyeni kwegumbi. Kubonakala njengesifihla-buso, futhi singasebenzisa njengesifihla-iso sokupholisa, kepha ungakhawuleli umcabango wakho. Lo mkhiqizo main for compress ashisayo noma comp abandayo ...
ISINGENISO INDLELA YOKUPHILA NOKUBANDAYO - Lawa ma-gel kids pack afaka phakathi kokucindezela okufudumele nokupholile, ayashesha ukubanda futhi asebenziseke kalula. Beka amaphakethe eqhwa emanzini ashisayo noma efrijini, angashintsha kalula phakathi kwamazinga okushisa futhi azogcina ukushisa noma amakhaza isikhathi eside ngokugoqwa okuthambile okubomvana. Ukwelashwa okubandayo kusiza ekwehliseni ukugeleza kwegazi, ukukhulula ekuphumeni kwegazi nokuvuvukala. Ukushisa / ukwelashwa okushisayo kusiza ngokusheshisa ukuhamba kwegazi nokusika ukuphulukiswa, ululame ngokushesha ku-inju ...
Isingeniso ISIQINISEKISO SOKUXHUMEKA KWEZINYOZI: Kubhekiswe ngaphambili nangemuva kwamadolo ngokucindezela okulungisekayo nokwelashwa okushisayo noma okubandayo, umklamo wamadolo obandayo weqhwa kunciphisa ngempumelelo ukuvuvukala, ubuhlungu nokuvuvukala ngenxa yokukhathala kwemisipha, ukulimala noma ukuhlinzwa. I-soft brace brace iphinde inikeze ukukhululeka okunethezekile kwezinhlungu nezinkinga, i-ACL, isifo samathambo, ukulimala kwezemidlalo, ukuhlinzwa nokuningi. INDLELA YOKUSHISA OKUSHESHAYO NOMA EBANDAYO: Ifaka phakathi amaphakethe e-gel asuswayo okwelapha okushisayo noma okubandayo. Iphakethe ngalinye lishelela kalula ...
Isingeniso Amakhaza anganciphisa ukuhamba kwegazi, ukwelashwa okubandayo kubambezela ukusakazeka, kunciphise ukuvuvukala, ukuqhuma kwemisipha nobuhlungu. Landela uhlelo lwerayisi ngemuva kokulimala: Phumula: Thatha ukuphumula futhi ugweme ukusebenzisa indawo elimele. Iqhwa: Icelela indawo elimele ngokushesha okukhulu, lokhu kusiza ukunciphisa ukuvuvukala, ukopha nokulimala ngokushesha. Ukuminyanisa: Songa ngebhandeshi, imvamisa gcina ibhandishi lokunwebeka kumakhithi osizo lokuqala. Phakamisa: Gcina ukulimala ngaphezu kwenhliziyo yakho ukuze kunciphise ukuvuvukala. Kungani Khetha Us? 1 ...
Kungani sikhetha i-gel ice pack ukuqeda izinhlungu? Noma ngabe unezinhlungu emuva ngenxa yokuhamba ngebhayisikili, noma ukuvuvukala okunamandla okuhlinzwa, vele usebenzise leli phakethe leqhwa ukukhululeka kobuhlungu bentamo nehlombe. Igama lomkhiqizo: I-Gel Pad Ice Pack Yosayizi Wentamo: 22 * ​​7.5 INCHES Isisindo: 800G Ngokwezifiso Ilogo nesitifiketi sephakheji: SGS, FDA, CE, REACH, PROP65, BSCI Lawa mapakethe wejel agcina eguquguqukayo ngemuva kweqhwa, ukuze uwabeke ngakuwe idolo, ihlombe nentamo. Ngemuva kwamahora ambalwa efrijini, iphakethe leqhwa lokulimala g ...
Isingeniso: Indwangu ye-satin eyinhlanganisela ye-PVC enamathela Usayizi: 47cm ububanzi, umbala we-600g: umbala o-pink ojwayelekile, umbala ungenziwa ngezifiso uma ubuningi bungaphezu kuka-2000pcs Ukusetshenziswa: Ngemuva kokugeza ikhanda, sebenzisa ukhilimu wokubhaka ngokulinganayo, gqoka ikepisi lokugeza elilahlwayo, bese ushisa ikepisi lokubhaka ekushiseni okuphakathi nendawo ku-microwave imizuzu engu-2-3. Lapho izinga lokushisa lingama-35-45 degrees, ligqoke cishe imizuzu eyi-15. Ifanele i-perm, ukunakekelwa kwangemuva kokudaya, nokunakekelwa kwekhwalithi yansuku zonke yezinwele. Kungani Khetha Us? ...
Ukuqonda, uphenyo lwamukelekile ukufona nganoma yisiphi isikhathi